Global Voices teny Malagasy » Lasibatry ny finoanoam-poana ny sola loha, hoy ny polisy ao Mozambika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Desambra 2019 5:01 GMT 1	 · Mpanoratra Dércio Tsandzana Nandika (en) i Liam Anderson, Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Afrika Mainty, Mozambika, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Jona 2017)
Nampitandrina ny vahoaka ny polisy tany Zambézia fa mety ho tratran'ny fanafihana ireo lehilahy sola any Mozambika . Sary: Anders Bolin / Flickr, CC-BY-NC 2.0
Nampanahy ny polisy tany amin'ny faritanin'i Zambézia any Mozambika ny trangan-javatra iray vaovao fakàna an-keriny ireo olona sola loha hanaovana fanondranana taova an-tsokosoko, izay voalaza fa teraka noho ny finoanoam-poana ka nanaovan'ny governemanta andiana hetsika mba hanakanana izany fomba fanao izany.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Jona 2017 dia lehilahy telo no nisy namono  tany amin'ny distrikan'i Milange, kilaometatra vitsivitsy miala ny sisintany Malaoita. Hita fa notapahan-doha ny iray tamin'ireo niharam-boina ary nesorina ny ampahany tamin'ireo taovany. Lehilahy roa no voasambotra ary niaiky avy eo fa mpitsabo amin'ny ody any Tanzania sy Malawi no mila ireo taova ireo.
Noho ny finoanoam-poana tany an-toerana no antony nahatonga ny famonoana izay nitana ny fiheverana fa misy volamena na afaka mampanan-karena ny lohan'ny lehilahy sola, hoy ny mpitondratenin'ny polisy iray tao Zambézia tamin'ny BBC . Voalohany tamin'io ny lehilahy sola no lasibatry ny resaka fanafihana tany Mozambika.
Saingy nisy tranga hafa niseho tao amin'ny firenena izay nahitana tatitra manokana momba ny famonoana vokatry ny ody maizina, izay niantraika manokana tamin'ny ireo olona bobo. Nanjary nahatsiravina tokoa ny raharaha ka voatery nanatanteraka iraka  ny Firenena Mikambana tamin'ny taona 2016 hanadihady ilay fomba fanao tany amin'ireo firenena afrikana Atsimo Atsinanana vitsivitsy.
Nisy tatitra  mikasika ny fanenjehana ireo olona bobo ihany koa tany amin'ny firenena hafa tany Atsimon'i Afrika, indrindra tany amin'ny manodidina an'i Tanzania, izay nanatontosain'ny  governemanta fanentanana mba hiadiana amin'ny finoanoam-poana sy ny hevi-draikitra ary ny fisamborana ireo olona noahiahiana.
Tany Mozambika, niresaka momba ity fanafihana farany natao tamin'ireo lehilahy sola loha tao amin'ny firenena ity ny olona tao amin'ny tambajotra sosialy .
Nampitandrina ireo izay nikasa handeha ho any an-toerana i Ukombe Weya , mponina ao an-tanàndehiben'i Maputo.
Fampitandremana ho an'ireo lehilahy sola izay handeha ho aty Mozambika
Lasibatry ny fanafihana noho ny fombafomba ireo lehilahy sola aty Mozambika, nampitandrina ny polisy Mozambikana taorian'ny famonoana olona telo lahy sola loha farany noho ny fakana taova. Olona roa no voarohirohy tao amin'ny distrika afovoany ao Milange izay toerana nitrangan'ny vono olona.
Nilaza i Hussene Algy Adamo , mpianatra monina ao an-tanàndehiben'i Inhambane, any atsimon'i Mozambika, fa efa mijery ity raharaha ity ny polisy any an-toerana:
Mino ny [polisin'i Mozambika] fa voarohirohy tafiditra amin'ity fahafatesan'ny lehilahy sola loha ity ny mpitsabo amin'ny ody.
Mino ny Polisy ao amin'ny Repoblikan'i Mozambika (PRM) fa fototra ara-kolontsaina sy baikon'ny mpanasitrana nentim-paharazana, avy amin'ny fombafombam-pinoanoam-poana no anton'ny fanondranana sy famonoana ireo sola loha hangalarana sy hamarotana ny taovan'izy ireo, ao amin'ny distrikan'i Morrumbala, faritanin'i Zambézia, ary hanondroany ihany koa ny fisian'ny fiheverana fa misy hery mampanan-karena ao amin'ny lohan'ireo lasibatra. Tao anatin'ny andro vitsivitsy, telo lahy nanana olana tamin'ny fihintsanam-bolo no maty tany amin'ity faritra ao amin'ny firenena ity.
Nizara tao amin'ny Facebook ny tatitra nataon'ny bilaogera Armen Snaippa i Angela Ferreira Samantha , izay nanolo-kevitra fa tafiditra ao anatin'ireo fanamby ara-tsosialy lehibe miantraika amin'i Mozambika ilay olana:
ALEOKO MAHALALA MENATRA I MOZAMBIKA
Firenena izay maha-menatra ny olona ny mivoaka ny trano miakanjo tahaka ny hilalao sarimihetsika mamoafady, ahitana ireo mpampianatra menatra angatahana hanao firaisana ho takalon'ny mari-pahaizana sy ireo mpianatra menatra hivaro-batana hahazoana mari-pahaizana, na asa, na tombontsoa hafa, firenena izay hitadiavan'ny vahoaka asa mendrika ary tsy mila mandratra na manaisotra ny ain'ny hafa mba hinanan'izy ireo mofo, firenena izay tsy hihazana ireo bobo sy sola loha noho ny fanao maizina na ny “mazia mainty” hikendrena fanambinan-karena mora foana.
Na teo aza ny nahahenjana ny raharaha dia mbola nisy foana ny olana sasany namazivazy kely. Nampiasa ny sehatra Twitter hanamarihana i Zenaida Machado, mpikaroka ao amin'ny Human Rights Watch any Angola sy Mozambika sady mpisera Twitter mavitrika, fa samy sola loha avokoa ny lehiben'ny distrikan'i Morrumbala, Pedro Sapange sy ny mpitondratenin'ny polisy ao Zambezia, Inácio Dina.
Tena manahy mafy momba ny famonoana olona sola noho ny fombafomba ny manampahefana Mozambikana
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/27/146033/
 nisy namono: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/06/mozambique-police-warn-that-bald-people-could-be-targets-of-ritual-attacks
 tamin'ny BBC: http://www.bbc.com/news/world-africa-40185359
 Ukombe Weya: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1606942439318609&set=a.189449594401241.49517.100000086062331&type=3
 Hussene Algy Adamo: https://www.facebook.com/hussenealgy.adamo/posts/679942472198444?match=bW%2FDp2FtYmlxdWUsY2Fsdm9z
 Angela Ferreira Samantha: https://www.facebook.com/lynda.ferreirasoares/posts/886891418119235?match=bW%2FDp2FtYmlxdWUsY2Fsdm9z
 8 juin 2017: https://twitter.com/zenaidamz/status/872757196806868993